N'ogbe 36 ″ W x 18 ″ D x 72 ″ H 5-shelf-ese Agba kpaliri Steel Waya Boltless Rivet ogbe Manufacturers and Suppliers | ABC
Nnukwu akwa 5-oyi akwa na-eme mkpọtụ, yana ihe eji emepụta ihe eji mepụta Z na anya na-acha anụnụ anụnụ, bụ ịhazi nnukwu iberibe n'ime ala gị, ụlọ ọrụ, ụlọ ọrụ, ụlọ ọrụ, ma ọ bụ ebe ọ bụla ebe achọrọ ịtọ arọ. ezigbo nchekwa ngwọta maka nchekwa nke ihe.
Okpokoro ya siri ike nwere uzuzu uzuzu nke na-eguzogide abrasion, chipping, na corrosion, na-ebute ike na ogologo oge. Ngwaọrụ shelf a nwere ike ịchekwa ihe dị iche iche, yana enwere ike idozi shelf ọ bụla 1.5 sentimita asatọ. Enweghị nsogbu na ihe dị arọ; shelf ọ bụla nwere ike ijide ihe dị ka kilogram 500. Ihe mkpuchi waya ya na-eme ka mmiri dịkwuo site na ndị na-agba mmiri n'elu, na-enye ohere ka ìhè na ikuku na-agbasa, ma na-enyere aka igbochi ebu, ebu, na ikpo ájá. Moddị modulu nke ogbe ahụ na-enye ohere ka a kpọkọta nkeji ahụ ọnụ dịka otu ogwe aka, ma ọ bụ dị ka akụkụ desktọọpụ abụọ. Ihe nkedo na-enweghị ihe mgbochi nke etiti na ihe jikọrọ ya na-enyere gị aka mezue nzukọ na nkeji na-enweghị mkpa mkpụrụ ma ọ bụ bolts.
Atụmatụ ndị a bụ:
Mpempe akwụkwọ nchekwa 1.5-oyi akwa eji ahazi nnukwu ihe na okpuru ulo, uloru, ebe a na-adọba ụgbọala, ụlọ ọrụ, ma ọ bụ ebe ọ bụla chọrọ nchekwa dị larịị.
2.Boltless ígwè nchekwa ogbe 5 kemeghi nwa nchara waya shelves nwere ike ịkwado ruo 2500 pound.
3. Enwere ike gbanwee shelf ahụ na ntinye nke anụ ọhịa 1.5.
4.Ejiri dị ka otu nchekwa nchekwa ma ọ bụ nkeji ọkara dị elu.
5.Heavy-duty ígwè etiti na-acha anụnụ anụnụ uzuzu mkpuchi maka ike na anwụ ngwa ngwa.
6.The shelf waya shelf nwere ike ime ka mmiri dị na mmiri ọkụ na-abanyekwu, mee ka ọkụ na ikuku kesaa karịa, ma gbochie nchịkọta nke uzuzu.
7. The kọlụm coupler mma kwụsie ike na-enye ngwa na mfe kọlụm nzukọ.
Nke gara aga: 30kgs na-arụ ọrụ dị mfe na-adịgide adịgide galvanized nchara bolted shelf maka iji kichin azụmahịa
Osote: Abctools Rack 48 ″ W x 24 ″ D x 72 ″ H 5-shelf Adịghị Ọrụ Kpaliri Steel Metal Shelving Boltless stacking Nchekwa ogbe
Akpokwasa mkpọtụ Boltless
1.2 mm ọkpụrụkpụ kpaliri ígwè mpempe akwụkwọ nchekwa ...
175kg 350kg 265kg oké ọrụ kpaliri ígwè b ...
Ikuku Botless 5-Shelf Steel Shelving 48 ″ ...
Abctools Akwa 48 ″ W x 24 ″ D x 72 ...
5-adị Steel Waya Garage Nchekwa Shelving Unit ...
Ime ụlọ ime ụlọ Shelf maka ulo Ngalaba Na-ahụ Maka Azụmaahịa Ogbe shelf Obere Nchekwa Obere Mpempe akwụkwọ nchekwa edo edo